Zithini izilumkiso zenzuzo? | Ezezimali
Oko kubizwa ngokuba sisilumkiso senzuzo ngaphezulu kwako konke isilumkiso malunga neenzuzo? malunga nenkampani edweliswe kwiimarike zezabelo. Ihlala i-a uhlaziyo ezantsi yentengiso kunye noqikelelo lwenzuzo, kodwa inokwenzeka nakwelinye icala. Oko kukuthi, ngoqikelelo olonyukayo kwimigca yeshishini, nangona oku kungaqhelekanga, olu hlobo lwesilumkiso sentengiso yesitokhwe. Bafumana indima ekhethekileyo ngalo mzuzu apho banokusebenza khona ukuze abatyali mali abancinci nabaphakathi bakwazi ukuphuhlisa eyabo imisebenzi engxoweni. Nokuba kuvulwa okanye kulungiswa izikhundla, kuxhomekeke kwimeko nganye.
Kwelinye icala, izilumkiso zenzuzo zilindelwe kakhulu zizo zonke iintlobo zeearhente zezemali ukuze zisetyenziswe bazenzele ezabo izigqibo ngokubhekiselele kutyalo-mali. Kungenxa yokuba, olu hlobo lwezilumkiso kwihlabathi lemarike yemasheya lisebenza kubalamli bezezimali ukulungisa amaxabiso ekujoliswe kuwo zizabelo, nokuba phezulu okanye ezantsi, kuxhomekeke kwimeko nganye. Kwimeko nayiphi na into, inefuthe elibaluleke kakhulu kuqingqo-maxabiso lwabo. Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba banokumisela ukuvela kwayo kwiimarike zemali, ngandlela ithile okanye enye.
Kwelinye icala, akukho mathandabuzo ukuba izilumkiso zenzuzo zoyikwa kakhulu ngabatyali mali abaninzi kuba zinokuchaphazela ukuhla kwesitokhwe. Okanye eyona nto imbi nangakumbi, enjengokubuyela umva kobundlobongela. Ngesi sizathu sichanekileyo, kuya kufuneka ulumke xa upapasha olu hlobo lwezilumkiso kuba inokwenza isimanga esingaqhelekanga esinokuchaphazela ipotifoliyo yakho. Ngaphandle kwezinye izinto zobugcisa eziqwalaselweyo kwaye kude kube kwinqanaba lokujonga. Ungalibali ukuba ukubaluleka kwayo kungaphaya kokuthethwa kwisilumkiso senzuzo.
1 Isilumkiso senzuzo: iimbono ezimbi
2 Uphengululo kwizicatshulwa
3 Imizekelo yamva nje ngesilumkiso senzuzo
4 Ukuphendula kwintengiso
5 Uxanduva lweNkampani
6 Ukuncitshiswa kwezibonelelo
Isilumkiso senzuzo: iimbono ezimbi
Ngayiphi na imeko, inye into eqinisekileyo kwaye oko kukuba izilumkiso zenzuzo ezinikiweyo kulo nyaka azenzelwanga akukho nto intle bayayeka ukuthanda iinkampani ezidweliswe kwiimarike zezabelo. Zombini ngokubhekisele kwiimarike zelizwekazi lakudala kunye nezaseMelika. Ngale ndlela, awungekhe ulibale ukuba uphononongo olusezantsi e-United States lukwelona nqanaba lisezantsi ukusukela ngo-2016. Oku kunokuba kukunika umqondiso malunga nokuwa okunokwenzeka kwiimarike kwelinye icala leAtlantic, kodwa oko kuyakuchaphazela abantu baseYurophu.
Ukuncitshiswa koqikelelo lwezezimali olwenzekayo, ngamandla amakhulu kunokuba bekulindelwe, kubeka amathandabuzo ekubuyisweni kweemarike zentengiso kwinxalenye yokugqibela yonyaka nakunyaka-mali olandelayo. Bawela kwimida ehamba ukusuka kwi-3% ukuya kwi-10%, Engeyiyo uphawu oluhle lokurhweba kwimarike yemasheya. Isenokuba sisilumkiso malunga nento enokwenzeka kuwe kutyalo-mali lwakho ukusukela ngoku. Ngaphandle kweenkampani ezidweliswe kwi-CAC 40, ezizezona zinendawo zokumisa ezilungileyo ziye zavela kolu hlaziyo.
Kwezi meko, iinkampani ebezilumkisiwe ngokuncitshiswa kuqikelelo lwezezimali zibone ukuba ahamba njani amaxabiso Ukuhla kancinci kancinci kancinci kancinci. Akumangalisi ukuba ixabiso labo ekujoliswe kulo lehlisiwe kwaye kwezinye iimeko ngamandla amakhulu ekuhleni. Ngale ndlela, izilumkiso zenzuzo sisiqinisekiso sokuba into ihamba kakuhle kwiinkampani zabo okanye ubuncinci ukuba baneengxaki zokuphucula iziphumo zekota. Le yinto yokuhlalutya xa ujonga ipotifoliyo yakho yotyalo-mali kwimeko apho kufanelekileyo ukwahluka ngalo naliphi na ixesha ukukhusela umdla wakho njengomtyali mali ophakathi nophakathi.
Kwelinye icala, kuyathakazelisa ukwazi ukuba uninzi lwamaxabiso eenkampani ezidwelisiweyo afunyenwe kwezi zilumkiso. Ukuya kwinqanaba lokuba kukho Umahluko omkhulu kwisithuba esifutshane kakhulu sexesha, emva kokuba ezi zilumkiso zenzuzo zenziwe zaba loluntu. Kwiiyure ezimbalwa kuthengiswa kakhulu okanye kuthengwa izinto ezikhoyo ngoku, kuxhomekeka kwimeko nganye nakwimeko nganye. Ngale ndlela, akukho kubuya mva kwizigqibo zabatyali mali abalandela ngokuthembekileyo ezi ngcebiso zithunyelwe ziarhente zezemali.
Imizekelo yamva nje ngesilumkiso senzuzo
Njengomzekelo, akukho nto ingcono kunale yenzekileyo kutshanje nenkampani Cie Izithuthi. Ewe kwanele ukuba isilumkiso sezi mpawu sabhengezwa kwizabelo zaso ukuba zehle ngamandla ekuhambeni kweemarike zezemali. Kuba, enyanisweni, izilumkiso zenzuzo esezantsi ezithe zenziwa esidlangalaleni kulo nyaka kule nkampani, ibangele ukuba ivale izihloko zayo ngesibetho esomeleleyo, idlula kwiiyure ezimbalwa, yehla phantse nge-7% ukuya kwi-23,16, i-35 ye-euro. Ukuba, nangayiphi na imeko, lelinye lawona maxabiso ohlwaywe ngaphakathi kwe-Ibex XNUMX.
NjengoCie Automotive, oku kwenzekile kunye nezinye iinkampani ezidweliswe kwimarike yemasheya, ezinye zazo zinokubaluleka okukhethekileyo kwi-indices zazo zesitokhwe. Oku kubonisa ukubaluleka okukhulu ukuhanjiswa kwezi zaziso ngemeko yeenkampani ezizuzileyo kule minyaka idlulileyo. Ngenxa yezi zenzo, abaphathi bengxowa mali bayanciphisa iiasethi zabo kwiinkampani ezichaphazelekayo ukuze ukuthengisa umlambo imiselwe ngokucacileyo kuxinzelelo lokuthengisa. Le yinto elula kakhulu kuzo zonke iiprofayili zabatyali mali. Ngaphandle kwezinye izinto zobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga esisiseko.
Kuzo zonke iimeko, impendulo yeemarike zezabelo iphantse yahlala imbi kakhulu, ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lwee-nuances. Akumangalisi ukuba le meko ibangela ukuhla okubukhali kwixabiso lodweliso lenkampani. Nangona kunokuba kunjalo ukuba le meko inokuthotywa kwixabiso layo kuyo nayiphi na imeko. Kananjalo ukuba kubekho ukungafani okuthile kumaxabiso kuba abatyali mali balindele ukuba kunqunyulwe (okanye kuncinci) kuqikelelo lwabo. Le yokugqibela ixhaphakile kwiimarike zezabelo njengoko ezi zilumkiso zinokuvuza okanye zichazwe nangabanye abalamli bezezimali.
Inyani yile yokuba kukho iinkampani ezinokuthi zibonise izilumkiso ezininzi zenzuzo kwakuloo nyaka-mali kwaye le meko ikhethekileyo ilahlekisa ngaphezu komtyali mali omnye ukwenza izigqibo malunga nento oyenzayo ngemali yakho. Kungenxa yokuba intshukumo ihlala ilandelwa yinxalenye elungileyo yeearhente ezisebenza kwiimarike zemali. Ayisiyo kuphela abatyali mali, kodwa nabarhwebi kunye nezinye iintlobo zabalamli kwimarike yemasheya. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba isenzo sinokuthatha ikhosi eyahlukileyo ngalo lonke ixesha.
Kwelinye icala, ayinakulityalwa ukuba uninzi lweenkampani ezidwelisiweyo ezenza ukuba uqikelelo lwenzuzo yabo ibe yeyasesidlangalaleni kunyanzelekile ukuba bazenze zaziwe luluntu kubatyali zimali ukuba oluqikelelo lwekamva alunjalo. ziya kufezekiseka kwiminyaka ezayo. Oku kuyenzeka, nokuba kungenxa yomnqweno wethemba eligqithisileyo okanye, ngokuchaseneyo, ngenxa yenguqu ebonakalayo kulindelo lweenkampani.
Ngayiphi na imeko, le yinto encinci eyaziwayo yezilumkiso zenzuzo kwaye iyaqwalaselwa xa kuthathwa izikhundla ngalo maxesha. Ngesi sizathu, isenokuba sisicwangciso-qhinga onokuthi usisebenzise ukusukela ngoku ukuya phambili kwaye nanini na xa kukho isilumkiso ngezi mpawu zivelisiweyo kwiinkampani ezidweliswe kwiimarike zezabelo. Ungalibali kuba inokukunceda tshintsha utyalo-mali lwakho ngeziqinisekiso ezinkulu zempumelelo kunangaphambili.
Ngayiphi na imeko, ligama elivelisa ukungaqondakali okuthile phakathi kwabatyali mali abancinci nabaphakathi kwaye ke kufanelekile ukucacisa ukungathandabuzeki malunga nentsingiselo yalo yokwenyani. Ewe, ukuzisombulula kufuneka wazi ukuba ezi zilumkiso zikarhulumente zisenzeka zihlala zinxulunyaniswa nazo Ukuncitshiswa kwezibonelelo ezilindelweyo, hayi ukunyuka okungalindelekanga. Kuyinto eyahlukileyo ekufuneka uyithathele ingqalelo ngalo lonke ixesha ufumana uhlalutyo lweenkampani ezidwelisiweyo eziye zahamba kule nkqubo ikhethekileyo.
Akukho ndlela, kufuneka uyijongele phantsi kuba emva kwayo yonke into emiselweyo Ixabiso lesitokhwe sokwenyani. Kubaluleke ngaphezu kwedatha ebalulekileyo malunga nabo, nangona uqala kwelinye icebo elihluke kakhulu ukuze ungene okanye ulungise izikhundla kwiimarike zezemali.
Ayothusi into yokuba le yinyani ekuya kufuneka ujongane nayo kwihlabathi lotyalo-mali kwaye inokukunceda kuphuhliso lwentengiso yemasheya. Mhlawumbi ngaphezulu kwezinye iiparameter ozisebenzisa rhoqo rhoqo kutyalo-mali kule minyaka idlulileyo. Ubuncinci eli nqaku liyakukusebenzela ukuze ukusukela ngoku uye wazi into ethe kratya malunga nokuba yintoni isilumkiso senzuzo. Ngokuqinisekileyo iya kuba ngale ndlela, akunjalo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » ishishini » Zithini izilumkiso zenzuzo?